उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको घरझगडा | चितवन पोष्ट
गृह » उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको घरझगडा
उद्योग वाणिज्य (उवा) संघ चितवन ५० वर्ष नाघेको संस्था हो । जिल्लामा यति पुरानो इतिहास बोकेको संस्था क्रियाशील हुनु भनेको सबैका लागि गौरवको विषय हो । विभिन्न कालखण्डहरु पार गर्दै यो संस्था यहाँसम्म आएको छ । १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि समाचार लेख्दै आएका कारण यो उवासंघका धेरै खाले क्रियाकलाप देख्न पाइएको छ । यसको आन्तरिक विषयमा त्यत्ति बढी जानकारी त छैन, तर विभिन्न खाले चर्चाहरु सुन्दै पनि आएकै हो । तर, अहिले उवासंघको अवस्था अल्लि फरक भएको छ ।
हामीले देख्दै आएको उवासंघको भूमिका पनि कता कता अलमलमा परेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । र, यसका आन्तरिक विषयहरु पनि छताछुल्ल हुन सुरू भएको छ । उवासंघभित्र घरझगडा रहेछ, यो ठोकेरै भन्न सकिन्छ । पहिला विवादहरु यसरी सतहमा आउने गर्दैन थिए । केही समयअघि सहनलाल प्रधानले पत्रकारहरुको जमघट राखे । त्यहाँ संघका वर्तमान केही पदाधिकारी र पूर्वअध्यक्षहरु पनि सहभागी थिए । प्रधानले आफू उवासंघको अध्यक्षमा उठ्न लागेको जानकारी पत्रकारहरुलाई गराए ।
सहन प्रधानको दायाँबायाँ बसेका केही वर्तमान पदाधिकारी र पूर्वअध्यक्ष ती पनि सबै भने थिएनन्, उनीहरुले संघको अहिलेको नेतृत्वले ठीक काम गरेन भने । अब सही व्यक्ति नआउने हो भने उवासंघभित्र समस्या बढेर जाने भन्दै सहनलाल प्रधानलाई अध्यक्षका रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा उनीहरुले गरे । यद्यपि, सहनलाल प्रधानले यो औपचारिक पत्रकार सम्मेलन हैन है भन्दै आफ्ना कुरा राखे ।
सहनलाल प्रधान यसअघि अध्यक्ष पदमा पराजित भएका व्यक्ति हुन् । उनी फेरि उठ्ने भएछन् । प्रधानको प्रतिस्पर्धी अब राजु श्रेष्ठ छन्, जो संघका अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । श्रेष्ठ यसअघिको चुनावमा सहनकै प्यानलमा थिए । अहिले सहन र राजुको बाटो फाटेको छ । दोबाटो आएपछि हिजो सहनका प्रतिस्पर्धी बनेर सहनलाई पराजित गरेका राजन गौतम अहिले राजुका पक्का सहयोगी बनेका छन् । उवासंघ चितवनको आउँदो अधिवेशनको चुनावी बाटो यस्तो बनेको छ ।
चुनावी राप र ताप चढ्दो छ । प्रधानको पत्रकार भेटघाटपछि उवासंघले पनि पत्रकार सम्मेलन राख्यो । संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य सबै उपस्थित थिए । संघको ठूलो हल खचाखच थियो । तर, बोलाइएका पत्रकारहरु बस्न नपाएर उभिनुप¥यो । कुर्सीभरि अरु नै थिए । अरु भन्नाले ती उवा संघका हितैषी र शुभचिन्तक नै थिए । पत्रकार सम्मेलन भनेर डाकिएको सो कार्यक्रममा उवासंघ अध्यक्ष राजन गौतमले आफ्नो कामहरुको लामो विवरण लिखित रुपमा नै पेश गरे । अध्यक्ष गौतमपछि बाहिरबाट चार जनाले बोले ।
ती चार जनामध्ये पत्रकार दुई जनामात्रै भए । पत्रकारबाहेक बोल्ने अन्य दुई जनामध्ये एक जनाले गौतमको भनाइप्रति असन्तोष प्रकट गरे । एक जनाले गौतमको प्रशंसा गरेर झन्डै झन्डै गौतमकै झैँ लामो भाषण गरे । बोल्छु भन्दै गरेका उवासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कल्याण जोशीले माइक समाएपछि राजन गौतम हलबाट निस्किए । बोल्ने क्रममा निवर्तमान अध्यक्ष जोशीले ‘यो पत्रकार सम्मेलन उवासंघ चितवनको आधिकारिक पत्रकार सम्मेलन नभएर राजन गौतमले राखेको पत्रकार सम्मेलन हो’ भने ।
सहनलाल प्रधानको पत्रकार भेटघाटमा संघका वर्तमान केही पदाधिकारी र पूर्वअध्यक्षले यो नेतृत्वले संस्थाको हित गरेन भनेर के भयो र अध्यक्ष गौतमले पत्रकार सम्मेलनमा संघको अहिलेको नेतृत्व इतिहासकै सफल भनेर ठोकुवा गरे ? उवासंघको कर्मचारीको एउटा तप्का राजीनामा लिएर बाहिरिएको छ, केही समयअघि । त्यसरी राजीनामा दिएका कार्यकारी अधिकृत रसिक प्रधानले माइन्युट लुकाउने गरेको आरोपसम्म लगाए, अध्यक्ष गौतमले पत्रकार सम्मेलनमा । अर्थात्, उवासंघ चितवनको ‘घरझगडा’ यसपालि नराम्ररी छताछुल्ल भयो । यो कुनै पनि हालतमा राम्रो कुरा हैन ।
यो ‘झगडा’ले संगठनको छविलाई सत्यानाश पार्छ । संघको भूमिकालाई कमजोर बनाउँछ । संघभित्र यस्ता खाले लफडाहरु रहेछन् र पो योपटक चितवन उवासंघलाई आफ्नो पुरानो लयमा देख्न पाइएन । नेपालमा निजी क्षेत्रको सक्रियतामा कुखुरापालन निकै फस्टायो । पोल्ट्रीको कुरा गर्दा उवासंघ जोडिन्छ ।
पोल्ट्री व्यवसायीहरु के कुरा गर्छन् भन्दा ५२ सालमा अहिलेको चितवन उवासंघ र त्यो बेलाको नारायणगढ उवासंघले सानो भए पनि पोल्ट्री एक्स्पो गरेको थियो । त्यो एक्स्पोका कारणले पोल्ट्रीलाई फैलाउन ठूलो मद्दत गरेको छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएका कारण उवासंघले जिल्लाको आर्थिक रुपान्तरणमा भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरु बनाएर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । यो भूमिका खेल्न सक्ने उवासंघ सफल उवासंघ हुन् । यस्ता कामले आफ्ना सदस्यबीचमा मात्रै सीमित नभएर उवासंघले समुदायको हितमा पनि सोच्यो भन्ने देखिन्छ ।
पोल्ट्री एक्स्पो त एउटा उदाहरण हो । हिजो चितवन उवासंघले देवघाटमा सप्तगण्डकी जलविद्युत् योजना बनाउने विषयमा पहल गर्ने कुरा गर्दथ्यो । चितवनको रामपुरमा कृषि तथा वन विश्वविद्यालय तत्काल बनोस् भन्नका लागि दबाब समूह बनाउँथ्यो । यस्ता सार्वजनिक कामका लागि उवासंघ अहिले मौनजस्तै देखियो । जब कि, बेला निकै बोल्नुपर्ने खालको छ । बोल्नेमात्रै हैन, कुद्नुपर्ने खालको छ ।
चितवनको व्यापारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुग्लिन–नारायणगढ सडकले पिरोल्न बाँकी को नै होला र ? व्यापारी, उद्योगी, सर्वसाधारण सबै मुग्लिन–नारायणगढ सडक समस्याका कारण नराम्ररी पीडित भएका छन् । एक वर्षअघि नै सकिनु पर्ने सो सडकको एकतिहाई काम अझै बाँकी नै छ । यस्तो मह¤वपूर्ण क्षेत्रमा ढिलासुस्ती नहोस् भनेर उवासंघजस्तो निकायले दिएको दबाब प्रभावकारी हुनेथियो । तर, उवासंघ त्यता लागेन । बाटो फराकिलो बनाउँदा सहरका घरहरु भत्कने देखेपछि उवासंघले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर घरहरु नभत्काइयोस् भनेकै हो । यसको मर्कामा प्रत्यक्ष रुपमा संघका सदस्यहरु पर्दथे होलान् । त्यसैले, उवासंघ यसमा तात्यो तर समग्र जिल्लावासीको पीडा बनेको मुग्लिन–नारायणगढको दुरवस्थाले उवा संघलाई तानेन ।
जिल्ला र समग्र देशको आर्थिक विकासमा मह¤वपूर्ण भूमिका रहने कामहरु पनि भएका छन् । शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने भएको छ । भरतपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यवसाय प्रदर्शनी केन्द्र बन्दै छ । यो काममा उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले नेतृत्व लिन सक्नुपर्दथ्यो । अथवा, यस्तै दूरगामी मह¤वका अन्य योजनाका लागि पहल गर्नुपर्दथ्यो । तर, यी दुवै काम हुन सकेनन् । चितवन उद्योग वाणिज्य संघ हैन, यस्तो मह¤वपूर्ण आयोजनाका लागि नेतृत्वदायी पहल चितवन उद्योग संघले ग¥यो । स्थापना मितिका हिसाबले र सदस्य संख्याका हिसाबले चितवन उवासंघभन्दा उद्योग संघ साह्रै सानो संस्था हो । तर, कामका हिसाबले निकै ठूलो उचाइ लियो । यो उचाइ देखेर उवासंघका मान्छेहरु के सोच्दा हुन् ?
राजन गौतमका पालामा आएर सबै कुरा ठप्प भएको हो भन्न खोजिएको पटक्कै हैन । तर, गौतमले जितेर आए ‘चमत्कारै’ गर्छन् भन्ने आशा धेरैले राखेका थिए । उनीबाट संघका सदस्यले मात्रै हैन, समुदायले पनि केही न केही आशा राखेका हुन् । संघका सदस्यहरु उनीबाट सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट के छन्, त्यो जानकारी भएन तर समुदायले जे सोचेको थियो त्योचाहिँ भएन । संघ सदस्यमा मात्रै सीमित नभएर समुदायका लागि पनि काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । नेतृत्वको मूल्याङ्कन यसरी पनि हुन्छ ।
‘करसम्म नतिर्ने उवासंघ भन्ने छवि थियो, त्यसलाई मेटाउन लाग्दा अरु काम गर्न सकिएन होला’– पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गौतमले भनेका थिए । हिजोको नेतृत्व बेठीक थियो भन्नेमा नै उनी बढी केन्द्रित छन् । बेठीकै थियो ? त्यसलाई सच्याउन लाग्दा घरझगडा यसरी छताछुल्ल भएको हो ? यसको निक्र्योल उवासंघ चितवनका तपाईं सवै सदस्यहरुले गरेर आउँदो निर्वाचनमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्नुहोला । एउटा गर्विलो संस्था चितवन उवासंघ यसरी घरझगडामा रूमल्लिने र अल्मलिने काम आउँदा दिनमा नहोस, शुभकामना !